Ahoana ny fomba hampiasana ny dikanteny amin'ny Youtube? ▷ ➡️ mpanaraka ▷ ➡️
Ampandehano ny dikanteny amin'ny video navoaka tao amin'ny YouTube mahitsy tsotra izao. Raha tsy hainao ny manao azy dia aza manahy. Hampianatra anao ny zava-drehetra momba an'ity fitaovana mahaliana ity izahay izay mampiditra ny sehatra horonantsary malaza ary mamela anay hijery atiny amin'ny fiteny hafa.
Ny dikanteny amin'ny YouTube dia tsy ampiasaina fotsiny azonao ireo horonan-tsary izay amin'ny fiteny hafa fa izy ireo koa dia safidy miavaka ho an'ireo izay manana karazana fahasembanana mihaino. Anio dia asehonay anao ny fomba tsotra sy haingana indrindra hampiasana ity asa ity amin'ny PC na amin'ny APP.
Fa maninona no zava-dehibe amin'ny dikanteny amin'ny YouTube?
Mpampiasa maro no mbola tsy mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny dikanteny ao anatin'ny sehatra YouTube. Izy ireo dia mety hahasoa mandritra ireo fotoana izay rehefa te-hilalao horonantsary amin'ny fiteny hafa isika na rehefa eo amin'ny toerana misy tabataba be dia be izay tsy azo henoina ny feon'ilay horonan-tsary.
Azo atao koa ny dikanteny lasa safidy tsara indrindra amin'ireny tranga ireny izay ahitantsika ny tenantsika eny amin'ny habakabaka izay tsy re na tokony tsy heno amin'ny feo avo ny feon'ireo horonantsary.
Na inona na inona antony, ny zava-dehibe dia izany Manolotra antsika safidy ny Youtube hampavitrika ireo dikanteny. Ny fomba fanaovana azy dia tsotra sy haingana, ary ny tsara indrindra dia ny ahafahantsika manamboatra azy amin'ny PC na avy amin'ny rindranasa finday aza.
Ampandehano ny dikanteny avy amin'ny PC
Mba hampiasana ny dikanteny amin'ny YouTube avy amin'ny solosainay Mila solosaina misy fifandraisana Internet fotsiny isika. Tsy ilaina ny misintona rindranasa na programa hafa. Ireto ny dingana tsy maintsy arahinay:
manokatra Youtube avy amin'ny solosainao PC amin'ny fidirana youtube.com
fikarohana ilay horonan-tsary tianao ho lalaovina
Tsindrio ny kisary "fanahafana”Izany dia hita eo amin'ny farany ambany amin'ny fikandrana playback.
Mifidiana ny mety indrindra araka ny fiteny
vonona. Hihodina izao ny dikanteny ny video
Raha sendra maniry vonoy ny dikanteny ao amin'ny horonan-tsary dia mila mamerina fotsiny ny dingana tsirairay voalaza etsy ambony ianao ary esory ny boaty "dikanteny":
Alefaso dikanteny avy amin'ny fitaovana iOS
Ny fomba fanazarana dikanteny amin'ny fitaovana iOS dia tsotra ihany koa. Raha mbola tsy hainao ny manao azy dia tandremo ny dingana tokony harahinao:
manokatra Youtube amin'ny fitaovan'ny iOS anao
Toerana ary alefaso ny horonan-tsary safidinao
tsindrio ambonin'ireo teboka mitsivalana telo izay miseho eo amin'ny zoro havanana ambony amin'ny efijery.
Tsindrio ny safidy subtitle (CC) ary safidio izay mety indrindra mifanaraka amin'ny fiteny.
Ampandehano ny dikanteny avy amin'ny fampiharana Android
Avy amin'ny rindranasa finday YouTube ho an'ny Android, azo atao koa ny mampandeha ny dikanteny amin'ny misy horonan-tsary:
manokatra ny fampiharana Youtube amin'ny findainao
Fikarohana sy miteraka ny horonan-tsary tianao
tsindrio ambonin'ireo teboka telo mitsangana (zoro ambony ambony)
Safidio ny safidy "Subtítulos"
1 Fa maninona no zava-dehibe amin'ny dikanteny amin'ny YouTube?
2 Ampandehano ny dikanteny avy amin'ny PC
3 Alefaso dikanteny avy amin'ny fitaovana iOS
4 Ampandehano ny dikanteny avy amin'ny fampiharana Android
Ahoana ny fomba hanaovana banner ho an'ny Youtube?